အလိမ်ခံရခြင်း အကြောင်းရင်းများ | မေတ္တာရိပ်
← ကရုဏာကို ခန်းခြောက်စေသူများ
ဘုရားဂုဏ်တော် ဆယ်ပါး →
အလိမ်ခံရခြင်း အကြောင်းရင်းများ	Posted on July 2, 2009	by mettayate သူတို့ကြောင့် အလိမ်ခံရတာ
လောက၌ သူတစ်ပါးလိမ်လည်ခြင်းကို ခံရသောသူဟူသမျှသည် သူတစ်ပါးတို့၏ ကောက်ကျစ်သောဉာဏ်ဟူသော သူတစ်ပါးတို့၏ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲ့သော ဉာဏ်ဟူသော ဗစိဒ္ဓရန်သူကို မိမိ၏ လိုချင်ရမ္မက်ငမ်းငမ်းတက်ခြင်းဟူသော အတွင်းရန်သူ နှင့် မိုက်မဲခြင်း၊ အဆင်ခြင်ပညာမရှိခြင်း ဟူသော မောဟ၊ အတွင်းရန်သူနှစ်ယောက်တို့က ပူးပေါင်းအားပေးကာ နှိပ်စက်ကြခြင်းကြောင့် အတိဒုက္ဘရောက်၍ အလိမ်ခံရခြင်း ဖြစ်ချေသည်။
သူတစ်ပါးကို လိမ်တက်သော သူတို့သည်လည်း မည်သည့် ဆေး၊ အင်းအိုင်၊ လက်ဖွဲ့သည်တို့ကြောင့် မဟုတ်။
စင်စစ်ကား သူတစ်ပါးတို့၏ လောဘကို တက်ကြွအောင်ပြုခြင်း၊ သူတစ်ပါးတို့၏ မောဟကို ပွားများစေခြင်း၊ လူရိပ်လူကဲကို ချင့်ချိန်တက်ခြင်း၊ မိမိ၏ဥစ္စာကို ဦးစွာ မနှမြောခြင်း၊ စကားကို သူတစ်ပါး ယုံကြည်အောင် ယုတ္တိဆင်၍ ပြောတတ်ခြင်း၊ လုံ့လ၀ိရိယရှိခြင်း ဟူသော အင်္ဂါပေတည်း။
(ဦးပြုံးချို (မဟာဂီတ) ၏ နေအေးလိမ်နည်း စာအုပ်မှ)
၆။ လူလိမ်၏ အစည်းအရုံးခံထားသော မိမိလူကို စိတ်ချယုံကြည်လွန်းအားကြိးညခင်း
သင်သည် ဖိနပ်စီးထားလျှင် ဆူးပေါ်သို့ နင်း၍ လျှောက်နိုင်၏။ ဘာသာရေးအသိ ပညာရှိထားလျှင် အန္ဆရာယ်များသည် လောကအတွင်းဝယ် ဘေးကင်းစွာ ကျက်စားနိုင်၏။
လောကို မည်သို့ ကောင်းကျိုးပြုသနည်းဟူသော ပေတံဖြင့် တိုင်းတာပြီးမှသာလျှင် ကြည်ညိုလေးစားခြင်းကို ပြုသင့်ပေသည်။
သူတစ်ပါး ဆင်းရဲသည်။ မိန်းမယောကျာ်း၊ မြင်ဖန်များသော်
ယုံမှတ်လို့ ပုံအပ်မိသူများအကြောင်း ၂ စာအုပ်မှာ ဥစ္စာပေါ ရုပ်ချော ဘွဲ့ရ အထက်တန်းပြ ဆရာမလေး တစ်ယောက်ကို မယားကြီးရှိသူ အရက်သမား၊ ဖဲသမား တစ်ယောက်က လိမ်လည်ပြီး လက်ထက်ယူလိုက်ပုံ အပြင် ဘယ်သို့ကြောင့် ဒီဆရာမလေး အနှိပ်စက်ခံရပုံကို အကျယ်ဖတ်နိုင်ပြီး အမျိုးသမီးများသည်လည်း ထိုသို့သော ယောကျာ်းမာယာ၊ အသနားခံ၊ သူတစ်ပါးလိမ်ညာမှုမှ လွတ်မြောက်၍ ကိုယ့်ဘ၀ကို တန်ဘိုးရှိသော၊်ဆင်ခြင်သုံးသပနိုင်သော အမျိုးကောင်းသမီးများ ဖြစ်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။
ထို မသူတော်မျိုးကို ပထမရွှေကျင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက ခုလိုဆုံးမတော်မူခဲ့ပါတယ်။
ကျင်ကြီးသည် အေးသည်ဖြစ်စေ၊ နွေးသည်ဖြစ်စေ၊
အဆင်းလှသည် ဖြစ်စေ၊ မလှသည်ဖြစ်စေ
မသူတော်သည် အမျက်ထွက်သည် ဖြစ်စေ၊ မထွက်သည်ဖြစ်စေ၊
စကားလှသည် ဖြစ်စေ၊ မလှသည် ဖြစ်စေ ရွံဘွယ်သာတည်း။
မီးခဲသည် ပူသောအခါ လက်ကိုမည်းစေ၏။
မသူတော်သည် ဒေါသအခါ ကြောက်စရာ
လောဘအခါ ရွံစရာ ဖြစ်၏။
(ပထမ ရွှေကျင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး)
ယုံမှတ်လို့ ပုံအပ်မိသူများအကြောင်း ၂ စာအုပ်တွင် နတ်ကတော်တွေရဲ့လိမ်ညာမှု၊ ရောဂါသည်ပေါ်မှာ ရက်စက်စွာ လိမ်ညာမှု၊ လူအချင်းချင်းလိမ်ညာမှု တွေကို အကျယ်ဖတ်နိုင်ပါသည်။ မိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ မိမိ မိသားစု၊ အသိုင်းအ၀ိုင်းများဖြစ်စေ ထိုသို့လိမ်လည်မှုတွေမှ ကင်းဝေးကြပါစေ။
This entry was posted in ကောက်နှုတ်မှုများ and tagged အရှင်ဇ၀န(မေတ္တာရှင်)ရွှေပြည်သာ. Bookmark the permalink.	← ကရုဏာကို ခန်းခြောက်စေသူများ
WordPress.com	Top Posts & Pages	ထေရ၀ါဒသည် ဟီနယာန မဟုတ်	လောကဓံတရား (၈)ပါး	ဓမ္မစကြာ တရားတော်	ဣဿာ နှင့် မစ္ဆရိယ ဦးဆန်းလွင် (အရှင် အာဒိစ္စရံသီ) စာအုပ်များ	မေတ္တာရိပ်	Createafree website or blog at WordPress.com.